भारतमा अर्को ठूलो आतंककारी हमलाको सूचना, भारतीय सेना हाई अलर्टमा
२०७५ फाल्गुण ९ बिहिबार, नयाँ दिल्ली । भारत विरुद्ध अर्को ठूलो आतंकबादी हमलाको सूचना पछि भारतीय सेना अहिले हाई अलर्टमा बसेको छ । ... बाँकी अंश»
टाइम्स मेगा पोल : लोकसभा चुनाव २०१९ मा मोदी सरकारलाई 'डिस्टिङ्सन'
२०७५ फाल्गुण ९ बिहिबार, नयाँ दिल्ली । भारतमा लोकसभा चुनावको बिगुल केही दिनमा नै बज्नेवाला नै छ । चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा आगामी चुनावमा कसको जीत हुन्छ ? ... बाँकी अंश»
छुटकारा पाउन पाकिस्तानी पतिले पत्नीलाई धकेल्यो भारतीय सीमामा, बीएसएफले गोली हान्यो
२०७५ फाल्गुण ९ बिहिबार, काठमाडौं । पाकिस्तानी एक पतिले आफ्नी पत्नीसंगको सम्बन्ध तोड्न खोज्दा पत्नीले धन्यै ज्यान गुमाउन पुगिन् । ... बाँकी अंश»
सर्वियाली प्रधानमन्त्री ब्रानाबिककी समलैंगिक साथीबाट बच्चा
२०७५ फाल्गुण ९ बिहिबार, काठमाडौं । सर्वियाकी प्रधानमन्त्री एना ब्रानाबिककी समलैंगिक साथीले बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् । सर्वियन प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो विश्व नेताको पहिलो घटना भएको उल्लेख गरेको छ । ... बाँकी अंश»
सियोल शान्ति पुरस्कार लिन मोदी पुगे कोरियामा, लोकसभा चुनावअघिको सम्भवतः अन्तिम विदेश भ्रमण
२०७५ फाल्गुण ९ बिहिबार, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिने दक्षिण कोरिया भ्रमणमा रहेका छन् । बिहीबार बिहान सियोल पुगेका मोदी राष्ट्रपति मुन जे इनसंग विशेष रणनीतिक साझेदारी गर्नका लागि कोरिया पुगेका हुन् । उनले मुनसंग छलफल गर्नेछन् । ... बाँकी अंश»
भीषण आगलागीमा परी कम्तिमा ६० जनाको मृत्यु
२०७५ फाल्गुण ९ बिहिबार, काठमाडौं । बंगलादेशको राजधानी ढाकामा आगलागी हुँदा कम्तिमा ६० जनाको मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
भारत, चीन र रुसको १६औँ विदेश मन्त्री बैठक फेब्रुअरी २७ मा
२०७५ फाल्गुण ८ बुधबार, बेइजिङ। रणनीतिक महत्व राख्ने विश्वका तीन प्रभावशाली देश भारत, चीन र रुसका विदेश मन्त्रीहरुको बैठक चीनमा हुने भएको छ। यही फेब्रुअरी २७ तारिखका दिन तीन देशका विदेश मन्त्रीहरुको १६औँ बैठक गर्ने तयारी भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। ... बाँकी अंश»
आणविक युद्धबाट बच्न बनाइएको बंकरमा बन्यो २ अर्बको घर
२०७५ फाल्गुण ८ बुधबार, काठमाडौं । अमेरिकाको लस भेगासमा एक बंकरलाई घरको रुपमा परिणत गरिएको छ । १४ हजार ६ सय २० वर्गफिटमा फैलिएको उक्त घरको मूल्य १ करोड ८० लाख डलर (२ अर्ब ४ करोड) तोकिएको छ । यसमा स्विमिङ पुलसहितको धेरै सुविधाहरु छन् । मानिसहरुले यो घरलाई निकै अनौठो घरको संज्ञा दिएका छन् । यो घरमा लगानी गर्नेमा बर्कशायर हाथवे पनि एक हो । यो घरमा ५ बेडरुम र ६ वाथरुम छन् । यो घरको पर्खाल र छतमा रङरोगन र जमिनमा घाँस बिछ्याइएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ फाल्गुण ८ बुधबार, लन्डन। बेलायती विमानस्थलहरुको वरिपरि ५ किलोमिटरको क्षेत्रमा मानवविहीन यन्त्र (ड्रोन) उडाउन निषेध गरिएको बेलायत सरकारले जनाएको छ। अघिल्लो महिला बेलायतका अतिव्यस्त हिथ्रो र ग्याटविक विमानस्थल नजिक ड्रोन उडाइएपछि हवाई सेवा नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो। ... बाँकी अंश»
२०७५ फाल्गुण ८ बुधबार, वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रिय ऋणको भार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अझ वृद्धि भएर २२ हजार अर्ब (२२ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर पुगेको छ । विगतमा ऋणभार र सरकारी वित्त घाटाका बारेमा जोडतोडले आवाज उठाउने रिपब्लीकन पार्टी अहिले चुपचाप छ । ... बाँकी अंश»
यसरी बढ्दैछ विश्व उद्योगमा चीनको राज
२०७५ फाल्गुण ८ बुधबार, काठमाडौं । पछिल्लो समय विश्वमा चीन एक महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रको रुपमा उदाएको छ । यस्तोमा चिनियाँ कम्पनीले समग्र विश्वमा आफ्नो प्रभाव विस्तारको प्रयास गरिरहेका छन् । यस्तोमा चिनियाँ कम्पनीको प्रभुत्व विस्तार हुन सक्ने आशंकाबाट डराएर फ्रान्स र जर्मनीका रेल कम्पनीले युरोपेली औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि संयुक्तरुपमा का मगर्ने घोषणा गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ फाल्गुण ८ बुधबार, नयाँ दिल्ली। भारतमा सन् २०१९ को यो डेढ महिनामै १२ हजारभन्दा बढी स्वाइन फ्ल्युका बिरामी भेटिएका छन्। बिरामी भएकामध्ये ३७७ जनाको मृत्यु स्वाइन फ्ल्युकै कारण भएको आशङ्का गरिएको अधिकारीहरूले मङ्गलबार बताएका छन् ... बाँकी अंश»
२०७५ फाल्गुण ८ बुधबार, ढाका। बङ्लादेशमा अश्लील सामग्रीहरू राखेको आरोपमा झण्डै २० हजार वेबसाइट बन्द गरिएको छ। अश्लीलता विरुद्धको लडाइँ अभियानका क्रममा उनीहरूलाई बन्द गरिएको सरकारी उच्च अधिकारीहरूले मङ्गलबार बताएका छन्। मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको देश भएकाले कामोत्तेजक अनलाइन सामग्रीहरू पाच्य नहुने भन्दै सरकारी पक्षले नियन्त्रण गर्न लागेको हो। ... बाँकी अंश»
साउदी प्रिन्सको स्वागत गर्दा स्टेजमा नै के खाए इमरान खानले ? भिडियो भाइरल
२०७५ फाल्गुण ८ बुधबार, काठमाडौं । साउदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानको पाकिस्तान भ्रमणको क्रममा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ । ... बाँकी अंश»
ट्रम्पविरुद्ध अमेरिकाका १६ राज्यमा मुद्दा
२०७५ फाल्गुण ७ मंगलबार, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध अमेरिकाको १६ राज्यमा मुद्दा दायर भएको छ । ट्रम्पको संकटकालको घोषणालाई लिएर उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । ... बाँकी अंश»
थाईल्याण्डमा निर्वाचनका लागि दश हजार उम्मेदवार
२०७५ फाल्गुण ७ मंगलबार, बैङ्कक। थाइल्याण्डमा आगामी मार्चमा हुने निर्वाचनका लागि झण्डै दश हजार उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। स्थानीय संचार माध्यमहरुले मंगलबार दिएको जानकारीअनुसार संसदीय निर्वाचनका लागि देशभरीका निर्वाचन क्षेत्रमा गरेर यति ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी परेको हो। ... बाँकी अंश»
२०७५ फाल्गुण ७ मंगलबार, हङकङ। विश्वमै ठूलो बैंक मानिएको एचएसबीसीको सन् २०१८ को नाफामा १६ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २० अर्ब डलर पुगेको छ। बैंकद्वारा मङ्गलबार जारी वक्तव्यमा उक्त नाफा करबाहेकको रकम रहेको जनाइएको छ। वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिमा चुनौतीपूर्ण बनेको बाह्य वातावरणका बाबजूद बैंकको नाफा सकारात्मक रहेको बैंकको भनाई छ। ... बाँकी अंश»
२०७५ फाल्गुण ७ मंगलबार, टोकियो। कार निर्माता कम्पनी होन्डाले मङ्गलबार बेलायतको एउटा ठूलो मोटर उत्पादन कारखाना (प्लान्ट) बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीले प्लान्ट बन्द भएसँगै करिब तीन हजार ५०० जनाको रोजगारी गुम्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ। ... बाँकी अंश»
२०७५ फाल्गुण ७ मंगलबार, माले, माल्दिभ्स । माल्दिभ्सका पूर्वराष्ट्रपति तथा प्रभावशाली नेता अब्दुल्ला यमिनलाई सोमबार पक्राउ गर्न आदेश दिइएको छ । ... बाँकी अंश»
विजेपी र सेनाबीच चुनावमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति
२०७५ फाल्गुण ७ मंगलबार, महाराष्ट्र । महाराष्ट्रमा बीजेपी तथा शिवसेना लोकसभा तथा विधानसभा चुनावमा साथ मिलेर चुनाव लड्ने सहमति गरेका छन् । ... बाँकी अंश»